Ireo mpitsangatsangana amerikana dia tokony hanohy hitsidika an'i Cuba na eo aza ny fandrarana ny fivezivezena
Home » Travel Associations News » Ireo mpitsangatsangana amerikana dia tokony hanohy hitsidika an'i Cuba na eo aza ny fandrarana ny fivezivezena
Etazonia sy ny mpizahatany hafa dia tsy tokony ho voasakana amin'ny fandraràn'ny dia na ny vokatry ny rivodoza Irma.
Ireo mpizahatany avy any Etazonia dia tsy tokony ho voasakana tsy hitsidika an'i Kiobà na eo aza ny toro-kevitry ny governemanta mifanohitra amin'izany, hoy ny mpandinika iray miaraka amin'ny orinasan-tserasera sy fanadihadiana GlobalData.
Vao haingana i Etazonia dia nanoro hevitra ny olom-pireneny mba tsy handeha ho any Kioba taorian'ny diplaomaty 21 amerikana nitatitra aretina tsy fantatra. Nisy ny tombantombana fa ny aretina dia vokatry ny fanafihana mpiasan'ny Etazonia monina any Cuba. Fa ny fitazonana ny fizotran'ny fizahan-tany dia tena ilaina mba hialana amin'ny firenena amin'ny rivodoza Irma.
Sean Hyett, mpandalina ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao amin'ny GlobalData, dia naneho hevitra hoe: “Satria tsy nisy porofo milaza fa tandindomin-doza ireo mpizahatany raha mitsidika an'i Kiobà, dia tsy tokony ho voasakana ny fandraràna ny dia na ny vokatry ny rivodoza Irma. Tokony hanohy hitsidika ny nosy Karaiba ny mpizahatany, satria ny fandraisana anjarany ara-bola dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay mba hivoahan'ny firenena sy ny toekarena.
Ny fandrarana ny dia dia notsikeraina noho ny antony ara-politika fa tsy miorina amin'ny porofo milaza fa tandindomin-doza ny mpizahatany amerikana amin'ny fitsidihana ny nosy Karaiba.
Airbnb, American Airlines, United Airlines, ary orinasa amerikana hafa dia nanambara fa hanohy ny asany any amin'ny firenena izy ireo na eo aza ny fampitandremana vaovao.
Nanampy i Hyett: “Miantehitra betsaka amin'ny karama sy ny asa avy amin'ny indostrian'ny fizahantany i Kiobà, izay manodidina ny 10 isan-jaton'ny harin-karena faobe nasionaly. Raha manakana ny mpizahatany amerikana tsy hitsidika izany fandrarana izany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny toekarem-pirenena sy ny olom-pireneny izany. ”
Raha afaka manintona mpizaha tany hatrany ny firenena dia mety tsy ho mafy ny vokadratsin'ny indostria sy ny toekarena. Ny fizahan-tany mitohy any Kiobà dia zava-dehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny vola miditra sy ny asa noforonin'ny indostria dia tena ilaina amin'ny fianianan'ny fianakaviana sy ny orinasa hanamboarana ny fananany simba.